Mutsva wekuunganidza muunganidzwa kubva kuZara mukubatana naKassl | Bezzia
Maria vazquez | 15/09/2021 18:00 | Chii chandinopfeka
Zara ichangoburwa "Kassl Edition", itsva capsule muunganidzwa iyo ichawana kune vanhu vazhinji kutenderera pasirese zvirevo zveKassl Editions, mucherechedzo une yakasunganidzwa muunganidzwa wekunze zvipfeko uye zvinhu zvinogara zveimba.
Kunyangwe ichiratidzwa muiyi nylon mvura ngowani kana sofa rakapfekerwa, zvinetswa naKassl zve hupenyu hurefu, mhando, kubata uye color zvinoonekwa mune chese chinhu mune ino capsule muunganidzwa. Kubatana kwekuda kuita kunounza pamwe Kassl yakachena, isina kupora aesthetic uye kuzvipira kwaZara kuhunhu.
1 About Kassl Editions
2 Zvidimbu zvakakosha zveiyo capsule muunganidzwa
KASSL Editions yakavambwa muna 2018, apo yakapfava asi ine rupo kucheka uye yehunyanzvi jasi rehove yakakurudzira boka reshamwari kuti vagadzire outerwear brand ine mweya usina murume, unogara kwenguva refu uye unoshanda uye kuzvipira kwakasimba kuhunhu. Kubva ipapo, KASSL Editions yaenda kune zvishongedzo uye zvemumba zvinhu sezvatinogona kuona izvozvi muunganidzwa weZara.
Zvidimbu zvakakosha zveiyo capsule muunganidzwa
Iyo ndeimwe yeakareruka, asiwo imwe yezvatinoda. Tinotaura nezvazvo refu padded cocoon jasi Yakagadzirwa nemusanganiswa wenylon uye taffeta. Mune navy bhuruu isu tinofunga iri sarudzo yakanakisa yekupedzisa kutaridzika kwemitambo.
Inotaridzika kunge inonakidza, muchokwadi, neiyo bhurugwa rakakura rakareba pamwe kwakavharwa nenyama muchiuno. Bhurugwa rinowanikwa mune matatu mavara uye kuti iyo femu inosanganisa mune ino edhisheni nehembe yakagadzirwa nappa dehwe uye / kana donje juzi.
Pamwe pamwe nedzangu dzambotaurwa, iyo refu burgundy jasi ine zvigamba muhomwe inomira kunze, iyo kapfupi nappa dehwe jasi mativi-maviri uye jira-rerudzi jira rakagadzirwa nemvere dzemakwai uye satini musanganiswa neruzivo rwemavara akabatanidzwa mumatoni ehondo uye burgundy.
Iwe unofarira here zvirevo zveiyo nyowani Zara capsule muunganidzwa mukubatana naKassl Edtitions?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » fashoni » Chii chandinopfeka » Mutsva wekuunganidza muunganidzwa kubva kuZara uchishanda pamwe naKassl